चीनबाट ल्याइएका विद्यार्थीलाई चार ठाउँमा राखिने, कुन हो त्यो ठाउँ ? - Mitho Khabar
February 8, 2020 mithokhabarLeaveaComment on चीनबाट ल्याइएका विद्यार्थीलाई चार ठाउँमा राखिने, कुन हो त्यो ठाउँ ?
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनको वुहान प्रान्तमा रहेका नेपाली विद्यार्थी र नागरिकलाई चार स्थानमा राख्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
चीनबाट आउँदा चीनको विमानस्थलमा स्वास्थ्य परीक्षण हुने, त्यहाँबाट नेपाल आउने यात्रुको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी सङ्क्रमित यात्रुलाई उपत्यकाको ती चार स्थानको ‘आइसोलेशन वार्ड’मा राखी उपचार गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सङ्क्रमितबाहेक अन्यलाई दुई हप्ता निगरानीका लागि छुट्टै स्थान (क्वारेन्टइन) मा राखिनेछ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले अत्यावश्यक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो । परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागीले पछिल्लो अवस्थाका बारेमा बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबारे टेलिकमले दिन थाल्यो सन्देश
March 19, 2020 March 20, 2020 mithokhabar
फेसबुकमा म्यासेज होइन, भ्वाइस गर्नुस् र पैसा कमाउनुस् !